Crystal Palace vs. Manchester City - Warbixinta Ciyaarta Kubadda Cagta - 14 APRIL 2019 - ESPN - TELESKA TELESOM
ACCUEIL » SPORTS Crystal Palace vs. Manchester City - Warbixinta Ciyaarta Kubadda Cagta - 14 APRIL 2019 - ESPN
Crystal Palace vs. Manchester City - Warbixinta Ciyaarta Kubadda Cagta - 14 APRIL 2019 - ESPN
Raheem Sterling oo laban laaban iyo himilada kale Gabriel Ciise Manchester City ayaa ku soo laabatay hogaanka horyaalka Premier League ka hor kulanka Liverpool ay la ciyaarayaan Chelsea ka dib markii ay ku guuleysteen 3-1 kulankii Crystal Palace.
Sterling ayaa horey u waayay fursad aad u weyn marka uu calaamadeeyay in shabagyadoodii in ay ku riday City ee 15 daqiiqo ka dib, oo waxay suunka dhibcood leh u dhameystiray goolka ka dib markii nasashada.
Luka Milivojevic saxiixay dhamaadkii lama filaan ah ciyaarta kooxda ee Pep Guardiola markii uu ku dhuftay laad xor ah qarkiisa aagga sagaal daqiiqo ka dhamaadka, laakiin Ciise waa erayga ugu danbeysay ee Gaba weerar lagu qaaday Daqiiqo 90e. .
Sterling ayaa goolal ka dhaliyay 21 City xilli ciyaareedkan, tartamada oo dhan, Guardiola ayaana amaanay awooda uu ku heysto dhacdooyinka aan weli dhaceynin.
"Dhibaatada Burnley waa ka xunayd maanta," ayuu u sheegay shir jaraa'id. "Waa inaan baranno golf iyo ciyaaraha kale sida tan. Tallaabada ugu muhiimsan waa kuwa soo socda. Mararka qaarkood waad maqnaaneysaa, waa inaad iska illowdey oo aad u baahan tahay inaad u guurto midka xigta. Waxa uu sameeyay dhameystir cajiib ah, islamarkaana Kevin's uu dhameystiray, dhamaadkii Sterling ayaana aheyd mid cajiib ah. "
Sterling ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay xaalada, waxaana uu intaa ku daray in City aysan awoodi karin inay jabiso tartanka horyaalka ee Liverpool.
"Markii aan yaraa, waxaad mar walba dooneysaa inaad calaamadiso fursaddaada ugu horeysa, mararka qaarna sidaas ma ahan," ayuu yiri.
"Ma dagaalami kartid. Waxaad haysataa daqiiqo 80, waxaad u baahan tahay inaad diyaar u noqoto fursada soo socota. maskaxda, kaliya sii soco iyo nasiib yimaado. "
Magaaladu waxay si bilaash ah u bilowday, abuurista fursad hore ah David Silva oo aan awoodin inuu si nadiif ah ula xiriiro daciif Kyle Walker gudbaan.
Waxay u baahnaydeen fursad dahabi ah ka dib markii daqiiqadii 10 markii Silva di D xaliyay ku guulaysteen in ay gaarey dhaawacyo ah oo uu keenay kubada si Sterling, oo aan laga yaabaa inuu seego boostada.
Laakiin Sterling wuxuu sameeyay isbeddel shan iyo toban daqiiqo ah Kevin De Bruyne 'U gudubtay xaqiiqda ayaa u ogolaatay inuu kubada dhexgalo islamarkaana goolka iska dhaliyo.
Jeffrey Schlupp ayaa si deg deg ah uga tagay xerada dhaawaca ah ee dhaawaca waxaana la bedelay Cheikhou Kouyate . , Magaalada sii wadaan inay ku hanjabaan iyo Scott Dann isku dayaya in ay nadiifiso xarun kale ee Silva
Sterling wuxuu muujiyay dhinaca kale ee ciyaarta, isagoo dib ugu soo laabanaya si uu u caawiyo Walker Wilfried Zaha
Laakiin Palace ayaa muujisay weerarka dilka ah ee dilka nolosha ka dib, Milivojevic ayaa goynayay iyo Christian Benteke ka hor inta aan magaalada la xoreeyn.
Wax yar ka dib saacad ka dib, Sane waxay ku khasabtey in si wanaagsan loo helo Vicente Guaita markii uu ku dhajiyay boostada.
Guaita ayaa ku soo laabtay wadnaha markii uu kubada ku dhuftay De Bruyne, oo uu goolka ku soo laabtay, ka dibna Benjamin. Weerarka Mendy wuxuu ka soo horjeeday masuulka aqalka.
Magaalada ayaa bilowday xilli labaad, sida De Bruyne oo maqan yar yar Sergio Aguero qallooca iyo Guaita oo si wacan u soo aruuray marka De De Xarunta Bruyne uu iska casilay laga bilaabo Martin Kelly .
Kooxda martida ah ayaa si fudud uga faa'ideysatay ka dib daqiiqadii 63, Sterling mar kale qarka u saarneyd gool uu dhaliyey markii uu diilinta ganaaxa ku dhuftay dhanka bidix.
Bernardo Silva guulaystay David Silva halka Guardiola uu bedelay isbedelkii ugu horeeyay ee galabta, ka dibna Ederson isla markiiba wuxuu istaagay beteke markii Benteke uu udhaliyay goolka. Dann ayaa ka soo jeeda dhinaca geeska madaarka, Cit wuxuu ka soo tagay Sergio Aguero oo bedelay Gabriel Isagoo daawanaya kulanka Champions League ee ay la leeyihiin Spurs todobaadka soo socda.
Palace waxay soo bandhigtay Max Meyer Andros Townsend - waxayna heleen hab ay dib ugu soo laabteen ciyaarta James McArthur waa la dhaawacay, Milivojevic ayaa laad xor ah oo gurigeeda ah ku qaatay.
McArthur wuxuu u sameeyaa habka Bakary Sako Palace, John Stones Beddelista Sane City, oo joojiyay dhammaan shakiga ku saabsan natiijada markii uu Ciise is dajiyay kadib markii uu De Bruyne ciyaaray aagga.
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/report?gameId=513506
Koobka Easter 2019: waa kan labaad ee isku xigta ee loogu talagalay suufka isboortiga
Youtube: DUMARKA OF THE CAGTA 2018 ugu quruxda badan